ကြိုးဆွဲရထားမော်ကွန်း - ထို rayhab
အဆိုပါ AKP ၏ပဲ့တင်သံဒေသခံရွေးကောက်ပွဲတွင်အများအပြားမြို့ကြီးများတွင်ဆုံးရှုံးနေဆဲတိုးတက်မှုရှိနေစဉ်, စည်ပင်သာယာအစိုးရနှင့် ပတ်သက်. ထူးခြားတဲ့စည်းမျဉ်းများဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ အဆိုပါအစီအစဉ်သစ်ကိုအဓိကအားမြို့ပြမြူနီစီပယ်အပါအဝင်အလုပ်လုပ်နီးပါးနိုင်ခြင်းကိုဖန်ဆင်းသည်။ သတင်း၏အဆိုအရ compile odatv'n [ပို ... ]
17 ကွဲပြားခြားနားသောရထားလမ်းစနစ်များအပါအဝင်အစ္စတန်ဘူလ်မက်ထရို, လမ်းရထား, ကြိုးဆွဲရထားပေါ်မှာ, ပတ်ပတ်လည်လိုင်းဆဲရှိသည်။ စုစုပေါင်း 221,7 13 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်၏အရှည်နှင့်အတူလိုင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဖြင့်4ကနေကီလိုမီတာ။ [ပို ... ]
တနင်္ဂနွေကိုကျော်ကျင်းပမယ့်အဆိုပြုချက်ကိုအပေါ် Group ၏တညီတညွတ်တည်းမဲများကခေါ်ဆောင်သွားဆုံးဖြတ်ချက်မှအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံ AK ပါတီမှ yks'y အခမဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့ ဝင်. မည်ဖြစ်ပြီးစာမေးပွဲစစ်ဆေးရေးတဲ့သူမည်။ IETT နှစ်ရက်ထပ်တိုးပျံသန်းမှုချပြီး 180 [ပို ... ]
အရာခရိုင်အတွင်းရှိအမှုအရာအစ္စတန်ဘူလ်အိမ်ရာအတွက် 10 နယူးက Metro လိုင်းကတော့စတားထွန်းလင်းကြလိမ့်မည်: Kagithane ကနေ Zeytinburnu ဖို့အများကြီးတည်နေရာ access ကိုလွယ်ကူချောမွေ့, Çekmeköyကနေအစ္စတန်ဘူလ်, Bakırköyအတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖြစ်လာမှစုဆုံအရေးကြီးဆုံး 10 မြေအောက်ရထားလိုင်းများအိမ်ရာဦးစားပေးပြောင်းလဲပေးလိုက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Emlakjet [ပို ... ]
ကျောင်းသားများအစ္စတန်ဘူလ်ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး lgs'y အခမဲ့အတွင်းသို့ ဝင်. လိမ့်မည်!
ေူပာင်းလဲရေးစာမေးပွဲအတွက်မနက်ဖြန် High School တွင်အားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီကျနော်တို့ရဲ့တညီတညွတ်တည်း၏ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များအပေါ် AK ပါတီ Group ၏အဆိုပြုချက်ကို၏ IMM ညီလာခံအတွင်းအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်အတွက်အားလုံးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (LGS) ရိုက်ထည့်ပါလိမ့်မယ်ကျောင်းသားများကိုအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးလိမ့်မည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်စာမေးပွဲနေ့ရက်များထဲမှာန်ထမ်းများနှင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများမှ Access ကိုအခမဲ့
အဆိုပါအဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများစာမေးပွဲ, ပွင့်လင်းပညာရေးဌာနစာမေးပွဲများ၏အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ကောင်စီမှာယူဆုံးဖြတ်ချက်, High School တွင်ဝင်ပေါက်စာမေးပွဲနှင့်ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းရေးရာရွေးချယ်ရေးစာမေးပွဲဝင်တော်မူလိမ့်မည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ 1 - ဇွန်လ, 15 အတွက် 16 High School တွင်ဝင်ပေါက်စာမေးပွဲအတွက် [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်သည်မနက်စောစော Al-Fitr မတိုင်မီ၎င်း၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အစ္စတန်ဘူလ်၏အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးမှချိတ်ဆက်တာဝန်ခံအခမဲ့အားလုံးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားလပ်ရက်တစ်လျှောက်လုံးသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ပှဲ3IMM လက်အောက်ခံİSPARK၏ပထမဦးဆုံးနေ့ကအားလုံးလမ်းဘေးကားရပ်နားအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကို [ပို ... ]
CHP အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ကောင်စီဝင် Kosedagi: တမြို့လုံးအတွက် Mass Transit ရထားစနစ်ပေါက်ပါလိမ့်မယ်
ပါလီမန်၏ CHP အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်အဖွဲ့ဝင် Mesut Kosedagi ညီလာခံစင်မြင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆို: "အစ္စတန်ဘူလ်၏လူများ၏နားရွက် obstructing တစ်မဟာဗျူဟာကနေခြစ် IETT ပြဿနာအကူးအပြောင်းကိုလျင်မြန်စွာတစ်İETTဤကာလအတွင်းဖျက်သိမ်းစေမည်။ ဒါကြောင့်အတိုချုပ်ထဲမှာကျနော်တို့İmamoğluကြောင့်၎င်း, အဖြေတစ်ခုထုတ်လုပ်ရန်ပါလိမ့်မယ် [ပို ... ]
အဆိုပါမြို့ကြွဖို့လူကူးဝင်ရောက်ခွင့်ပေးÇaycumaပြည်နယ်ဆေးရုံ၏မြူနီစီပယ်သူဝန်ဆောင်မှု 14 419 တထောင်တထောင်ကလူဝင်ကြ၏ နေ့မှစ. (ကြိုးဆွဲရထားပေါ်မှာ) ၏ဆောက်လုပ်ရေးဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မယ်။ လမ်းပေါ်မှာအဗ္ဗဒူလာKalaycıမှလူကူးဝင်ရောက်ခွင့်ပေးရန်အမြူနီစီပယ်ခြင်းဖြင့်Çaycumaပြည်နယ်ဆေးရုံ [ပို ... ]
အလုပ်ကတည်ဆောက်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) မြေအောက်ရထားလိုင်းကိုအပြည့်အဝအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာမှာရောက်နေပါတယ်။ သို့သော်ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamaoğlu၏တဲရလဒ်များကိုအဆိုအရဒေသခံရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်မတ်လ 31 2019 နိုင်ငံများအသင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအတွက်ကမြေအောက်ရထားဆောက်လုပ်ရေးအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်ဘယ်လို IMM ကိုရှေးခယျြ [ပို ... ]
တူရကီသည်လက်ရှိတွင် 12 ငါတို့မွို့မြို့ပြရထားလမ်းစနစ်များကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဒီပြည်နယ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီ, Bursa, Izmir, Konya, Kayseri, Eskişehir, Adana, Gaziantep, Antalya, Samsun နှင့် Kocaeli ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးယူနစ် 3461 မြေအောက်၌ဤအခိုက်၏အဖြစ်, LRT, [ပို ... ]
ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်အချိန်မှာ Rumeli Hisarüstü-Aşiyanကြိုးဆွဲရထားလိုင်း
နိုင်ငံသားများထို့ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားမျှော်လင့် Rumeli Hisarüstü-Aşiyanအဘယ်အရာအခါကြိုးဆွဲရထားပေါ်မှာလိုင်းရပ်, လမ်းကြောင်းများနှင့်ဘူတာများဖွင့်လှစ်ရမည်လော Hisarüstüကမ်းခြေဒေသနှင့်အတူလည်ချောင်းမှာတည်ရှိပါတယ်လိုင်း Rumeli အဆိုပါAşiyanပန်းခြံအကြားတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ M6 နှင့်အတူပြီးစီးသောအခါ, လိုင်းပေါင်းစည်းမှု [ပို ... ]
Çaycumaပြည်နယ်ဆေးရုံမြူနီစီပယ်အတွက်ကြိုးဆွဲရထားပေါ်မှာအဗ္ဗဒူလာKalaycıလမ်းကနေလူကူးဝင်ရောက်ခွင့်ပေးလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်မြို့တော်ဝန် Bulent Weigand များ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ 2014 အတွက်ဒေသခံရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်ကတိတော်များအကြား Kent ဓာတ်လှေကား (ကြိုးဆွဲရထားပေါ်မှာ) တွင်တည်ရှိသောÇaycumaမြို့တော်ဝန် Bulent Weigand, [ပို ... ]
စက်တင်ဘာလထဲမှာစတင် "စမတ်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကွန်တိန်နာ" စီမံကိန်း (ထို operating system ကို install လုပ်ဖို့အစ္စတန်ဘူလ်ကတ်လဲလှယ်အတွက်ပေပုလင်းနှင့်သံဗူး) ကအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်Mevlüt Uysal, နိုင်ငံသားများကြီးမားသောထိခိုက်အနိုင်ရနှင့်ကျောင်းသားများ။ လူမှုရေးမီဒီယာမြှင့်တင်ရေး [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဌာန, အဓိကအားဖြင့်တူရကီနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်အများအပြားမြူနီစီပယ်များအတွက်မြို့အတွင်းပိုင်းမက်ထရိုနှင့်ရထားလမ်း, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များကိုတည်ဆောက်နေသည်။ ဒါကြောင့်ဒေသခံအစိုးရများအနေဖြင့်စုဆောင်းမရနိုငျသောကွောငျ့အစိုးရအပညတ္တိကျမ်း၌အရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုပြောင်းလဲသွားသည်။ အကြွေးတွေ [ပို ... ]
Balance အချက်ပေးစနစ်စတင်အဆုံးသတ် istanbulkart အတွက် Add
IMM ကိုသမ္မတ Mevlut Uysal, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အချိန်အရှုံးနှင့်၎င်းတို့၏အမြီးပြန်အားသွင်းတားဆီးဖို့မိုဘိုင်း App ကို istanbulkart မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ခေတ်ပြိုင်မြို့တော်စည်ပင်က၏အကောင်းဆုံးဥပမာပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးလျှောက်လွှာ Uysal, "အရာအားလုံးအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့အလှဆုံးထိုက်ကြောင်းညွှန်ပြ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားများ [ပို ... ]
မည် "ထောက်ပံ့" ကွဖို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ IMM Zama ကုန်ကျစရိတ်
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်နိုင်ငံသားများဖို့တိုးမြှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုထင်ဟပ်ဖို့, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး "ထောက်ပံ့" မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ သမ္မတအလုပ်စတင်ထုတ်ပေးအစီရင်ခံစာများအမိန့်ယဉ် IMM ၏ညီလာခံအားဖြင့်တညီတညွတ်တည်းအတည်ပြုခဲ့ခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, စျေးကွက်စီးပွားရေးအခြေအနေများ [ပို ... ]